ICleopatra: Owesifazane wamandla (Ukuhlaziywa koxwebhu)
Ukuhlaziywa koxwebhu lwe-1999
Ngo-1999, i-ABC-TV yabonisa indlela yokuphila kaCleopatra - uKumkanikazi uCleopatra VII , uFaro wokugcina waseYiputa, kunye nomnye wabafazi abambalwa abalawula iYiputa . I-Discoververy Channel yanika kwakhona i-documentary yayo ebomini bukaCleopatra. UMlawuli waseYiputa, watshata ababini ababusi baseRoma, ngokulandelana: uJulius Caesar kunye noMarc Antony , emva kokutshata nomntakwabo u-Ptolemy XIII njengesiko leentsapho ezilawulayo.
Ubomi bukaCleopatra buye lwabangela umdla kubantu bebomi bakhe kuze kube ngoku. Uhlobo lwe-ABC lobomi bukaCleopatra aluzange lube yincwadi yokuqala yokubhalwa kwelo bhinqa elapheka ukufa kwindlu yasePtolemy eYiputa. Ukususela kuCassius Dio ukuya kwiClutarch ukuya kuChaucer ukuya kuShakespeare ukuya kuTheda Bara ukuya ku- Elizabeth Taylor , ibali likaCleopatra liye lagxininisa umdla wehlabathi unentshonalanga kwiminyaka emibini.
Umgxeki weNew York Times uBen Brantley uthe ngemveliso ka-1997 ka-Shakespeare "u- Antony noCleopatra ,"
Ukuba iCleopatra yayiphila namhlanje, ngokuqinisekileyo, mhlawumbi uya kuba neziyobisi ezizinzileyo. Ngethamsanqa kuthi, izinto ezinjalo azikho kwiYiputa yaseYiputa okanye e-Elizabethan eNgilani.
Kutheni kuthambile? Ngaba kungenxa yokuba ukusebenzisa kwakhe amandla kwakungavamile kuba wayengumfazi? Ingaba kuba kubonakala njengenqabileyo, okungafaniyo, ukungafani nendawo "yendalo" yabasetyhini?
Ingaba nje kukuthakazelisa ukuba "umfazi nje" wayengumdlali oyintloko kwixesha elibalulekileyo nelinomdla kwimbali yamaRoma?
Ingaba kuba ubomi bakhe bubonakalisa imeko ehlukeneyo yabasetyhini eYiputa, xa kuthelekiswa neRoma kunye nenkcubeko yentshona kamva? Ingaba kuba iCleopatra imfundo kunye nobunkokheli kuvela ngaphandle, kukukhuthaza okanye ukwesaba?
Ingaba kuba ibali lakhe liphathelele uthando kunye nesondo? Ngaba kungenxa yokuba ubudlelwane beentsapho ezingasebenziyo (ukusetyenziswa kwegoggon yangoku) luyathakazelisa, kungakhathaliseki ukuba nini na kuphi na? Ingaba yimizuzu emibini-yexesha elide lokugqitywa ngokugqithisileyo? (I-akhawunti yePlutarch , kunye neengxelo zayo zeziganeko ezonwabileyo, ndikhumbuza kakhulu indaba ye- People Magazine .)
Ngaba kungenxa yokuba uCleopatra imela umzabalazo wesizwe esincinci ukumela kwimibutho emikhulu yembali, njengoko iYiputa yalwa, ngoFaro wokugqibela, kokubili ukugcina uxolo kunye negunya lamaRoma kwaye uhlale uzinzileyo ngokusemandleni?
Ngokugxininisa imeko ekhethekileyo yomlawuli waseGrike-Macedonian wobukumkani baseYiputa , ngaphezu kobomi besifazane abaqhelekileyo, ngaba siyichaza ngokucacileyo ukuba ubomi bentombi bufana nobani kwixesha lasendulo nelidala?
Umfanekiso kaCleopatra, olawulayo ngokudibanisa kwamanxibelelwano akhe ahlanganisiweyo kunye nabalawuli baseRoma kunye nelifa lakhe, kuye kwagqalwa ngokubhaliweyo ngabantu abhaliweyo kunye nokudweba abaphulaphuli besilisa. Uthando lukaCleopatra lusitsho njani malunga nendlela amadoda acinga ngayo ngabasetyhini kule minyaka engamawaka amabini?
Ngaba iCleopatra emnyama ? Kwaye kutheni le nto? Uthini ubungqina bendlela uhlanga lwaluphathwa ngayo ngexesha likaCleopatra?
Yintoni inomdla kulo mbuzo ukusho malunga nento esiyicinga ngayo ngobuhlanga namhlanje?
Akukho zimpendulo ezilula kwimibandela enje. Yayiphi iminyaka ecinga ngayo ngeCleopatra eninzi into ekuthethwa ngayo loo minyaka ecinga ngayo ngabafazi abasemagunyeni. Yeka indlela eyahlukileyo ngayo - nangamawaka eminyaka - wabona uCleopatra esichazela kakhulu malunga nexesha lobugcisa njengoko lisitshela ngoCleopatra.
Ezi ziqhagamshelwano ziya kunceda uqhathanise "iimbali" zembali zeli fom. Wafumana njani itrone yeYiputa? Ngaba kwakucacile ukuba unyana kaCleopatra wokuqala wayengunyana kaYulius Caesar? Wayede kangakanani eRoma? Waqala njani ukudibana noMarko Antony?
Ngaba iCleopatra Black?
ULouisa May Alcott
5 ii-Essentium Gregorian Chant Starter CDs
Kutheni iincwadi zeeKholeji zindleko kakhulu?
Isingeniso kwixesha elimisiweyo
Ubomi beTalcott Parsons kunye neempembelelo zakhe kwi-Sociology
Usuku lweNtshonalanga kaValentine Amazwi kuWoo Othandekayo Wakho
Indlela yokudibanisa isiFrentshi rhoqo -Izenzi zeVIR